Lampard oo sheegay war aad ugu xun taageerayaasha Chelsea, kahor kulanka caawa ee UEFA Super Cup 2019 – Gool FM
(Yurub) 14 Agoosto 2019.Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id ee gaar ah, kahor kulanka ay caawa kula ciyaari doonaan Liverpool koobka UEFA Super Cup, kaasoo ka dhici doono garoonka Vodafone Park magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Frank Lampard ayaa ka hadlay waxyaabo badan oo ku saabsan ciyaarta caawa iyo qaabka ay ugu diyaargaroobeen ciyaartoydiisa kooxda Chelsea kulankan, iyo sidoo kale xiddigaha ugu caansan ee ka dhaawacan.
Hadalada Frank Lampard ayaa xambaarsanaa warar qaar ee aad ugu xun taageerayaasha kooxda Chelsea, kaddib markii uu xaqiijiyay in wiilka reer Franc ee N’Golo Kanté uu dhaawac muruqa ah soo gaaray intii lagu gudi jiray ciyaartii ay axada la ciyaareen Manchester United.
Lampard ayaa sidoo kale xaqiijiyay in Antonio Rudiger iyo Willian aysan awoodi doonin inay kusoo bilowdaan line-upka kulanka caawa, kaliya waxay fadhin doonaan kursiga keydka.
Waxaa xusid mudan in macalinka reer England ee Frank Lampard uu ugu wada yeeray kulanka caawa ee UEFA Super Cup dhamaan 33 ciyaartoy ee kooxda Chelea, laakiin waxay u badan tahay inaysan ciyaari doonin saddexda xiddig ee kala ah, Rudiger, Kanté iyo Willian.